UMgcwabo yahlukana nofileyo ngendlela eyiyo - Christian Literature Fund
By CLF	All, Pamphlets, Pamphlets for Congregations XHO171
Yahlukana nofileyo ngendlela eyiyo
Imingcwabo isoloko ikho. Yonke impelaveki abantu bayadibana, bevela kwiindawo ngeendawo, beze kufihla oswelekileyo. Bamana bebonakala besiya emangcwabeni, maxa wambi kuhanjwa ngeenqwelo eziphucukileyo neebhasi. Akuba efihliwe umfi abantu baya kuloo mzi ufelweyo. Kuyenzeka ukuba abantu babe baninzi ngangokuba kufuneke ukuba kumiswe intente. Bonke kufuneka banikwe ukutya. Ke ngoko imifihlo iba neendleko ezixhomileyo. Bakho abantu ababa zizityebi ngokuba ngabangcwabi. Kanti abazalana nomfi maxa wambi bayahlwempuzeka ngenxa yeendleko zomngcwabo. Ke ngaba amaKrestu amelwe kukuba nazimbono zini na malunga nemingcwabo? Yiyiphi eyona ndlela amaKrestu amelwe kukungcwaba ngayo?
Akukho bani unokukuphepha ukufa
Sonke siyakoyika ukufa. Ukufa yinto ebuhlungu. Sizama ukungacingi noku-cinga ngokufa. Kufanelekile ukuba kube njalo, kuba ubomi busisipho esixabisekileyo esisiphiwa nguThixo. Kodwa nakanjani liyafika ixesha lokuba ukufa kusondele kuthi. Kusenokuba ngumntu osondele kum oswelekayo, kanti lobakho nexesha lokuba ibe ndim. Xa sifelwe ngumntu esimthandayo iintliziyo zethu ziba buhlungu. Siyazila xa sifelweyo. Nabasekuhlaleni bayothuswa kukufa.
Kwenzeka ntoni xa afayo umntu?
Abantu beenkolo ngeenkolo bacinga ngokwahlukeneyo malunga nokufa. Abanye bathi konke kuphelile xa ufayo. Bathi akukho nto ishiyekayo. Bathi konke kuyacinywa kukufa. Abathile beenkolo zasempumalanga bathi ofileyo uyabuya, aphinde aphile, kodwa ngoku usenokuba sisilo okaye intyatyambo. Kanti abanye, njengama-Afrika agcina amasiko akudala, bathi abafileyo abemkanga, kodwa “bangabafileyo abaphilayo” bezizinyanya. Izinyanya ezi ke kuthiwa zisekho phakathi kwabasadla ubomi, zinako ukuthetha nabo, zibancede okanye zibahlisele ingqumbo. Yiloo nto abafileyo besoyikwa ngabaphilayo, nto leyo eyenza ukuba ofileyo akhunjulwe ngamadini, ade anqulwe nokunqulwa.
Ke thina maKrestu sicinga ngokufa ngenye indlela kunaleyo yabantu abangakholwa kuYesu Krestu neLizwi lakhe. IBhayibhile isifundisa ukuba lowo ukholwa kuKrestu, ebeke ithemba lakhe kuye, uselenabo ubomi obungunaphakade (uYohane 5:25). Nokuba siyafa okwemizimba le yethu (2 kwabaseKorinte 5) thina ngokwethu siba nobona bomi bethu obutsha esibudla kunye noKrestu (2 kwabaseKorinte 4:14; kwabaseKolose 3:1-4). Yonke le nto ingapha kunokuqonda kwethu (1 kwabaseKorinte 15 35 neevesi ezilandelayo). Nto nje esiyaziyo kukuba uKrestu wakoyisa ukufa — kungathi “ukubulele ukufa” (1 kwabaseKorinte 15:55-58).
Kaloku uvukile ekufeni. Ke mhla athe wabuya eze kuhlaziya konke, uya kuthi thina bakholwa kuye asivuse sinemizimba emitsha eyeyethu, size sihlale kunye naye ngonaphakade (1 kwabaseTesalonika 4:13-18). Ke ngoko siya kuba kwindawo apho kungekho lusizi nazintlungu, indawo apho kuxhanyulwa inyweba yokuba yimilowo yakwaThixo. IBhayibhile ithi oko kuya kuba lizulu elitsha nehlabathi elitsha.
Ewe, besisenokuthi ukufa ngenye indlela kuzisa lukhulu kokholwa kuKrestu (kwabaseFilipi 1:21). Ke amaKrestu nawo eva buhlungu xa afelweyo, kodwa akafani nabangengomakholwa. Kaloku thina makholwa siyazi ukuba uMsindisi wethu uyaphila, yaye siya kuye xa sifayo. Siba buhlungu ngokulahlekelwa kwethu, kungekuko ngenxa yoswelekileyo ngokwakhe. Kaloku yena uxhamla indy-weba yokuba ngumlowo wakwaThixo!
Umngcwabo ubalulekile kwabafelweyo
Umngcwabo ubalulekile. Phofu awuba-lulekanga kangaka kofileyo — ubaluleke kwabafelweyo. Ongcwabayo uyabulisa. Lo gama umzimba womfi ungekafihlwa sihlala sisiva ubuhlungu ngokusweleka kwakhe. Ke, ukuze sizisule iinyembezi, kufuneka simfihle umfi. Yiloo nto umngcwabo uqhutywa ngendileko, bekho abazalana nomfi nabasekuhlaleli.
Iindlela ezilungileyo zokuqhuba umngcwabo
Ngokuhamba kwexesha kuye kwabakho iinkqubo zokungcwaba ezifanelekileyo: nditsho imilindo, izambatho zokuzila, indlela umngxuma ombiwa ngayo uze uphinde udityelwe, amazwi athethwayo namaculo aculwayo, uku-tyhilwa kwelitye, imbeko eyenzelwa abahambela kuloo mzi ufelweyo, ukuxhasana kwabantu, ukwabelana ngokutya, ukuwenziwa kwentando yomfi esenzelwa imbeko. Ezi zinto zidla ngokuba yindlela endilekileyo yokuba kwahlukanwe nomfi. Zizinto ezilungileyo. Ibali lokufa kukaLazaro nokungcwatywa kwakhe ngumzekelo omhle wako oku (uYohane 11).
Mihla le liya lisanda inani labazi-tshisayo izidumbu zibe luthuthu endaweni yokuba bangcwabe. (Yile nkqubo ibizwa ngokuthi cremation.) Abathile abakuthandi ukuba kwenjiwe njalo, kodwa abanye bayayithanda, yaye neqela lamakholwa ayakwenza oku. Kakade naxa singcwatyway0 izidumbu zethu ngokuhamba kwexesha ziba luthuli. INkosi iya kusinika imizimba emitsha ukubuya kwayo. Kodwa kufuneka inkqubo ibe nendileko xa kutshiswa umzimba womfi, kufane nomfihlo. Ngaphezu koko kufuneka kuhambe nentuthuzelo.
Kubalulekile ukuba umngcwabo wom-Krestu ungafani nowomntu ongelokholwa. Kwakuba njalo umfihlo lo uba bubungqina ehlabathini.
Akufuneki imingcwabo yamakholwa ibe lithuba lokuhomba, kodwa maku-qhutywe ngentobeko nendileko.
Injongo yomfihlo wamaKrestu kuku-bathuthuzela abantu. Kufuneka bakhu-njuzwe ukuba uKrestu ukoyisile ukufa.
Umfihlo ukwaba lithuba lokubulela ku-Thixo ngobomi bomfi nendlela uThixo asilondodloza ngayo.
Ukushunyayelwa kweLizwi likaThixo, namaculo, nemithandazo, nenkqubo yomngcwabo, konke kufuneka kuvakalise iindaba zokukoyisa ukufa kukaKrestu.
Kumngcwabo kufuneka abantu bafumane ithuba lokuzila bambu-lise umfi, kodwa kungabi njengaba-ngathuthuzeleki.
Umfihlo kufuneka womeleze ubudle-lwane pkakathi kwemilowo yakwaThixo abaxhasanayo. Kuhle ukuba abantu beendidi ngeendidi neemvaba ngeemvaba bavisisaniswe emifihlweni.
Kufuneka abantu bomelezwe ukholo nethemba nothando. Kufuneka babe nokuphila okweentshatsheli kweli hlabathi, bengabantu abayithobeleyo iNkosi.
Ngelishwa kubakho nezinto ezingalun-ganganga emifihlweni. Kukho iinkqu-bo ezingafanelekanga namasiko angafunekiyo.
Injongo yeenkqubo ezininzi zase-mifihlweni asikuko ukuthuthuzela nokubonisa imbeko, kodwa zise-kwe kuloyiko, kusoyikwa ukuba ongasekhoyo usenosihlisela amashwa. Kusenokuba soyika oko sinokwenziwa ngabanye abantu, okanye okuno-kuthethwa ngathi. Abantu bayoyika ukuba basenokuhlelwa ngumonakalo nangamashwa. Boyika ukuba bafikelwe sisithuko. Kanti akukho sizathu sokuba zonke ezi zinto zoyikwe. Kaloku uKrestu uboyisile bonke oomagunya nooziphathamandla (kwabaseKolose 2:15). NgoKrestu soyise satshatshela (kwabaseRoma 8:31-39). Akukho nto sinokuyoyika xa sikholwa kuye.
Maxa wambi inyaniso ayithethwa emifihlweni. Kusenokwenzeka ukuba umfi anconywe kangangokuba abe ngathi ngumntu esingamaziyo. Ewe, kulungile ukuyikhumbula imisebenzi emihle yomfi, kodwa yimpazamo ukumbonga ngokugqithisileyo unolwimi. Kutheni ukuba abantu benjenjalo? Mhlawumbi bayazisola ngokumphatha kakubi umfi esahleli. Mhlawumbi bayazidla ngobuciko babo.
Kusenokwenzeka ukuba ibe ngabantu ababengavisisani nomfi abathetha kakhulu emfihlweni. Kodwa ithuba lokudala imvisiswano selidlule! Kufuneka sivane sisekho, senzelane imbeko lo gama sisadla amazimba. Musa ukulinda umfihlo ukuzama ukulungisa undonakele.
Maxa wambi abantu basebenzisa imifihlo ukuhlohla ezabo. Abopolotiko bathanda ukwenjenjalo. Endaweni yokuba abafelweyo bathuthuzelwe suka kukhuthazwe ukuxhaswa kweqela elithile nokulandelwa kweenkokeli zalo.
Kanti nabaziinkokeli zasecaweni basenokuphazama emifihlweni. Oko kwenzeka xa bathetha kakhulu berhorhisa ngomtyholi nesihogo nengqumbo kaThixo, okanye kuphela kwanto bayithethayo kukukhuthaza inguquko, befuna ukuba abantu bazibandakanye nemvaba yabo. Hayi, kumfihlo into ephambili mayibe kukuthuthuzelwa ziindaba ezimnandi ezingoKrestu.
Hayi ukugabadela kwabathile emifihlweni! Yeka ixabiso yaloo bhokisi iqaqambileyo! Ngoozimuncu-muncu nentabalala yenyama into etyiwayo. Ewe, kude kubekho neziselo ezihexisayo. Neenqwelo eziqeshiweyo zezodidi oluphambili. Wona umfihlo ulungiselelwa ixesha elide, ube wona umzimba womfi ugcinwe emkenkceni ngeedleko ezixhomileyo. Kanti kusenokwenzeka ukuba kufuneka bazifake ematyaleni ukuzihlawula ezo ndleko. Ngenene, imifihlo yenye yezizathu eziphambili ekubenzeni amahlwempu abantu. Hayi bo! Kungcono ukuba imali ichithwe ukuxhasa inkqubela yabaphilileyo. Umngcwabo usenokuba nendileko ungahombanga.
Isiqhamo esikrakra semifihlo elawulwe ngumona nokuzicingela unguhlohl’ esakhe lixhala nesazela samva. Ubu-senokuzisola usithi akuchithanga mali yaneleyo, okanye uzisole ngokuthi awuhambanga kakuhle umsebenzi. Imifihlo isenokuhlisela abantu ukuxabana nokungavisisani.
Abantu abadla ngokuba ziinkokeli emifi-hlweni kufuneka bavane bakhombe indlela. Kufuneka banqandwe abantu abaxhamla abanye ngokungcwabisa ngemali exhomileyo. Lifikile ixesha lokuba abefundisi nabadala nabangcwabi aba-ngamakholwa bazimisele ukuvula iindlela eziya kubalungela abafelweyo.
Abona ekufuneka bawulungise lo mcimbi yimibutho yoomasingcwabane, ezi ku-thiwa Burial Societies ukuzibiza. Le mi-butho inamandla amaninzi. Kufuneka iqonde ukuba ukukhonza kwayo kuba-lulekile. Ke imelwe kukucebisa abantu ngokufanelekileyo. Akufuneki amahlwempu axhanyulwe. Kufuneka ibaxhase ngo-bulumko abantu kweli xesha leentsizi zokufelwa. Xa kunjalo nabangcwabi baya kuthenjwa bashishine ngenkqubela.
Neecawe kufuneka zicingisisie ngezi ndawo zikhokelwa ziziBhalo. Kufuneka zixhobise iinkokeli ukuze zibe nokuwacebisa amakholwa. Kufuneka kushunyayelwe ngezi ndawo kwiinkonzo zangeCawe. Kufuneka amakholwa ancediswe ukuwuqonda lo mbandela engekafelwa. Xa kunjalo aya kuba nako ukuyiqhuba ngendileko imifihlo ukufa kwakusondela emizini yawo.
Sonke kufuneka siphinde sifunde kwiBhayibhile ngokufa novuko nobomi esibunikwa nguKrestu. Xa kunjalo imifihlo yamakholwa ayiyi kufana neyabangakholwayo.